Bosaso oo lagu soo bandhigay Markabkii ARIS 13 ee dhawaan lagu Afduubtay Puntland(Sawirro) | RBC Radio
Posted on March 19, 2017 RBC, Sawiro
Markabkan ayaa muddo saddex maalood ah lagu baarayey dekedda magaalada Boosaaso,kaddib markii looga shakiyey in uu yahay markab kala gudbiya hubka iyo xaalufka lagu hayo xeebaha Puntland.
Markabka ARIS 13 ayaa si rasmi ah loogu wareejiyey Wafdi ka socday dalka Jabuuti kuwaasoo u yimid arrinta markabkaas.
Xaflad xil-wareejin ahayd ayaa lagu qabtay dekadda magaalada Boosaaso,waxaana goob joog ka ahaa Madaxweyne kuxigeenka Puntland,Wasiiro iyo wafdi ka socday dalka Jabuuti iyo maamulka gobolka iyo kan degmada Boosaaso.
Madaxweyne kuxigeenka Puntland Cabdixakiin Xaaji Cumar Camey ayaa sheegay in uu ku faraxsan yahay in gacanta Puntland uu dib usoo galay markabku,wuxuuse qiray in xeebaha Puntland lagu hayo jariif sharci-darro ah siiba kalluumpeysata dhibaato loo geysto.
Mudane Cabdixakiin Xaaji Cumar Camey ayaa sheegay in beesha caalamku ay iska dhago tirtay cabashooyinka ku aadan kalluumeysiga sharci-darada ah ee lagu hayo xeebaha dalka Soomaaliya.
Madaxweyne kuxigeenka Puntland ayaa goobta ka sheegay in mid hal darajo la dalacsiin doono ciidankii ka qeybqaatay soo furashada markabka.
Markabka Aris 13 sii-deyntiisa sidoo kale ,waxaa qeyb weyn ka qaatay odayaasha degaanka kuwaasoo ku qanciyey dhalinyarada iney si nabadgelyo ah ku sii-daayaan markabka iyo shaqaalaha saaran.